Mayelana NATHI - Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.
I-BeijingTopsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd. yasungulwa ngo-2003, yazimisela ukuba yibhizinisi lezokuphepha elihlonishwayo le-R & D. Indlunkulu yiseZhongguancun Hightech Park, isizinda sezimboni saseJinqiao, Itholakala ku-3, 000 square metres.
Inhlokodolobha ebhalisiwe ingama-42 million RMB. Sinezinkampani ezingaphansi ezintathu: iTOPSKY, TBD, KYCJ njll, amabhizinisi kazwelonke aphezulu.
Izisetshenziswa zomlilo, kufaka phakathi irobhothi lomlilo, uhlelo lwenkungu yamanzi, amathuluzi wokubacindezela, imitshina yokuphila nokunye
Amaphoyisa nemishini yezempi kubandakanya isudi ye-EOD, i-telescopic manuipulator.I-robot ye-EOD, eduze ne-drill ethule njalonjalo.
Umtshina wegesi kufaka phakathi umtshina we-laser methane ovuza umtshina, umtshina owodwa wegesi, umtshina o-2 koku-1, umtshina we-4 ku-1 wegesi njalonjalo.
Imayini noma isitshalo samakhemikhali imikhiqizo ephephile ngaphakathi kufaka phakathi ikhamera ephephile yedijithali, imitha yezinga ledijithali ephephile ngokwangaphakathi, imitha yebanga le-laser ephephile ngokwangaphakathi nokunye.
Emishinini yomlilo, amathuluzi okusindisa, ucwaningo lwempilo namaphoyisa nemishini yamandla, inkampani yethu inenzuzo eyingqayizivele.
Ekuqondisweni kokuphepha nasemishini yokusebenza komthetho, singomunye wabakhiqizi abakhulu kunabo bonke.
Njengamanje, umkhiqizo wethu ubusuthunyelwe emazweni angaphezu kuka-20 kanye nasezifundeni ezinjengeMelika, iFrance, i-Australia, i-Italy njalonjalo.
Kuze kube manje, inkampani yethu inakho
Isitifiketi seSizwe Sokulawulwa Kwekhwalithi Yezinsiza Zomlilo eziyi-17
Umaki wesitifiketi sokuphepha kwezimayini eziyi-103 (MA)
9 Ubufakazi bokuqhuma kwamakhemikhali
Isitifiketi se-6 CE
Izitifiketi ezingama-45 zobunikazi
UTopsky uqhubeka nokwethula imikhiqizo emisha ngejubane lokuziqhenya ngama-30% ama-increments minyaka yonke. Inkampani yethu ibheka ukunikela ngentengo enengqondo, ukulethwa okusheshayo kanye nensizakalo enhle yama-aftersales njengenhloso yethu. Sethemba ngobuqotho ukubambisana namakhasimende amaningi ngokwengeziwe avela kuwo wonke umhlaba ngokuya ngokulingana nangokuzuzana.
IBeijing Topsky yasungulwa ngezinhlokodolobha ezibhalisiwe ezingama-42 million RMB kanye nekheli endaweni ehlala eHaidian District, eBeijing.
Sithuthele ezakhiweni zebhizinisi esifundeni saseHaidian esinamamitha skwele angaphezu kwekhulu
Inkampani yethu yaqala ukusuka ekuhwebeni yaya enkampanini yokukhiqiza.
Esinye isakhiwo sethu esisha sokukhiqiza saqala ukusetshenziswa.
Ukuvumela umhlaba uphephe kakhudlwana.
Ukuxazulula inkinga yokuphepha kwendabuko ngobuchwepheshe obungebona obendabuko.
Ukuphepha komphakathi nokuphepha kokukhiqiza.